ကောင်လေးတစ်ယောက် မှအမျိုးသမီး ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး ဆံပင်ညှပ်မပေးလို့ဆိုကာ – Cele Lover
ကောင်လေးတစ်ယောက် မှအမျိုးသမီး ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး ဆံပင်ညှပ်မပေးလို့ဆိုကာ
ကောင်လေးတစ်ယောက် မှအမျိုးသမီး ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး ဆံပင်ညှပ်မပေးလို့ဆိုကာ ဖင်ကိုင်နိုကိုင်တွေ လုပ်သွားခဲ့သောအခါ
ကျွန်တော့ အမေဆ.က်ရှ.ယ်ဟာရ.စ်မန့် လုပ်ခံရပါတယ်။ စောနလေးတင်ပါ၊ ညနေဘက်ကြီးပါ၊ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းအိမ်သွားပီးပြန်လာတော့အမေစိတ်ည.စ်ည.စ်နဲ့ထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်နေတာကိုတွေ့တော့စိတ်နဲနဲပူသွားတယ်၊ ဆိုင်အရှေ့မှာလဲ ပန်းအို.းတွေကွ.ဲနေတာတွေ့တယ်ပိုပီးစိတ်ပူသွားတယ်။ အဲ့တာနဲ့အမေ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲမေးတော့တော်ရုံနဲ့မပြောဘူး။ ကျွန်တော်ထင်တာက
ဆိုင်ကတပည့်တစ်ယောက်နဲ့ပြဿနာတတ်တယ်ပေါ့ ပြီးတော့မှသိရတာကဆိုင်ကယ်အနီနဲ့ကွမ်းတွေလဲစားထားတယ်။ ဂျစ်ကန်ကန်နဲ့တဲ့ဆိုင်ထဲဝင်ပီးဆံပင်ညှပ်ခြင်လို့ဆိုတော့အမေကယောက်ျားလေးမညှ.ပ်ဖူးပြောတော့နဲနဲပဲပါးမှာဆိုပီး အမေ့ဆီပြေးပီးဖ.င်ကို.င် နို့.ကို.င်လုပ်တယ်တဲ့၊ အမေကပန်းအို.းတွေနဲ့ပ စ်ပေါ.က်ပြီး၊ ပါ းရို.က်လိုက်တော့နင်ငါနဲ့တွေ့မယ်ဆိူပီးပြန်ထွက်သွား
တယ်။ အဲ့တာနဲ့ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းအိမ်ကပြန်ရောက်တော့စောနကဖ.န်ကွ.ဲစတွေကိုရှင်းပီးဘာဖြစ်တာလဲမေးပီးစကားပြောနေတုန်းထပ်ရောက်လာတယ်။ အဲ့တာနဲ့ကျွန်တော်လဲပြေးပီး ဓ. ားနဲ့ခု တ်တော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ထွ.က်ပြေးသွားတယ်၊ အမေကဆံပင်ညု.ပ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာကျွန်တော့တစ်သက်ပါ၊ ဒါမျိူးတွေတစ်ခါမှမကြုံဖူးပါဘူး၊ အခုထိေ.ဒါသထွ.က်လို့ကျွန်တော့်လက်တွေ
တုန်နေတုန်းပဲ၊ မိန်းကလေးတွေသတိထားဖို့ပါ၊ အခုက ဥပဒေမဲ့ခေတ်ရောက်နေပီ၊ ဒါမျိူးတွေဆိုသည်းမခံပါနဲ့၊ ကျွန်တော့အမေနေရာမှာအပျိုလေးတစ်ယောက်သာဆိုဘယ်လိုနေမလဲဒါကြောင့် ဂရုစိုက်ကြပါ။ အခုလိုအောက်တန်းကျပီး ေ.ခွးစိ.တ်ရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကဒီနိုင်ငံမှာတင်မဟူတ်ဖူး။ နေရာတိူင်းမှာရှိနေတာသတိထားကြပါကုန်ပဒေသာအကျော်ရွှေရတနာရုပ်ရှင်ရုံအရှေ့မှာဖြစ်သွား
တာပါ။ edit စောနကလေးကမှဘေးကလူတွေပြောတာပါ၊ သူ့ဦးလေးကဗိုလ်တဲ့၊ ကျွန်တော့အမေကိုထိရင်တော့ဗိုလ်တင်မက သမ္မတဆိုလဲ..းပါပဲ။ edit နေရာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်ဗျအတိအကျသိတာနဲ့ပြန်ပြောပါမယ်ဗျ၊ မြောက်ဒဂုံကဟုသိရသည်။ အချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြသော ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ မွအမ်ိဳးသမီး ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္ထဲဝင္ၿပီး ဆံပင္ညႇပ္မေပးလို႔ဆိုကာ ဖင္ကိုင္ႏိုကိုင္ေတြ လုပ္သြားခဲ့ေသာအခါ
ကြၽန္ေတာ့ အေမဆ.က္ရွ.ယ္ဟာရ.စ္မန႔္ လုပ္ခံရပါတယ္။ ေစာနေလးတင္ပါ၊ ညေနဘက္ႀကီးပါ၊ ကြၽန္ေတာ္ သူငယ္ခ်င္းအိမ္သြားပီးျပန္လာေတာ့အေမစိတ္ည.စ္ည.စ္နဲ႔ထိုင္ခုံေပၚမွာထိုင္ေနတာကိုေတြ႕ေတာ့စိတ္နဲနဲပူသြားတယ္၊ ဆိုင္အေရွ႕မွာလဲ ပန္းအို.းေတြကြ.ဲေနတာေတြ႕တယ္ပိုပီးစိတ္ပူသြားတယ္။ အဲ့တာနဲ႔အေမ့ကိုဘာျဖစ္တာလဲေမးေတာ့ေတာ္႐ုံနဲ႔မေျပာဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တာက
ဆိုင္ကတပည့္တစ္ေယာက္နဲ႔ျပႆနာတတ္တယ္ေပါ့ ၿပီးေတာ့မွသိရတာကဆိုင္ကယ္အနီနဲ႔ကြမ္းေတြလဲစားထားတယ္။ ဂ်စ္ကန္ကန္နဲ႔တဲ့ဆိုင္ထဲဝင္ပီးဆံပင္ညႇပ္ျခင္လို႔ဆိုေတာ့အေမကေယာက္်ားေလးမညႇ.ပ္ဖူးေျပာေတာ့နဲနဲပဲပါးမွာဆိုပီး အေမ့ဆီေျပးပီးဖ.င္ကို.င္ ႏို႔.ကို.င္လုပ္တယ္တဲ့၊ အေမကပန္းအို.းေတြနဲ႔ပ စ္ေပါ.က္ၿပီး၊ ပါ း႐ို.က္လိုက္ေတာ့နင္ငါနဲ႔ေတြ႕မယ္ဆိူပီးျပန္ထြက္သြား
တယ္။ အဲ့တာနဲ႔ကြၽန္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းအိမ္ကျပန္ေရာက္ေတာ့ေစာနကဖ.န္ကြ.ဲစေတြကိုရွင္းပီးဘာျဖစ္တာလဲေမးပီးစကားေျပာေနတုန္းထပ္ေရာက္လာတယ္။ အဲ့တာနဲ႔ကြၽန္ေတာ္လဲေျပးပီး ဓ. ားနဲ႔ခု တ္ေတာ့ဆိုင္ကယ္နဲ႔ထြ.က္ေျပးသြားတယ္၊ အေမကဆံပင္ညဳ.ပ္ဆိုင္ဖြင့္ထားတာကြၽန္ေတာ့တစ္သက္ပါ၊ ဒါမ်ိဴးေတြတစ္ခါမွမႀကဳံဖူးပါဘူး၊ အခုထိေ.ဒါသထြ.က္လို႔ကြၽန္ေတာ့္လက္ေတြ
တုန္ေနတုန္းပဲ၊ မိန္းကေလးေတြသတိထားဖို႔ပါ၊ အခုက ဥပေဒမဲ့ေခတ္ေရာက္ေနပီ၊ ဒါမ်ိဴးေတြဆိုသည္းမခံပါနဲ႔၊ ကြၽန္ေတာ့အေမေနရာမွာအပ်ိဳေလးတစ္ေယာက္သာဆိုဘယ္လိုေနမလဲဒါေၾကာင့္ ဂ႐ုစိုက္ၾကပါ။ အခုလိုေအာက္တန္းက်ပီး ေ.ခြးစိ.တ္ရွိတဲ့ေယာက္်ားေတြကဒီႏိုင္ငံမွာတင္မဟူတ္ဖူး။ ေနရာတိူင္းမွာရွိေနတာသတိထားၾကပါကုန္ပေဒသာအေက်ာ္ေ႐ႊရတနာ႐ုပ္ရွင္႐ုံအေရွ႕မွာျဖစ္သြား
တာပါ။ edit ေစာနကေလးကမွေဘးကလူေတြေျပာတာပါ၊ သူ႔ဦးေလးကဗိုလ္တဲ့၊ ကြၽန္ေတာ့အေမကိုထိရင္ေတာ့ဗိုလ္တင္မက သမၼတဆိုလဲ..းပါပဲ။ edit ေနရာကိုစုံစမ္းေနပါတယ္ဗ်အတိအက်သိတာနဲ႔ျပန္ေျပာပါမယ္ဗ်၊ ေျမာက္ဒဂုံကဟုသိရသည္။ အခ်ိန္ေပးၿပီးဖတ္ရႈ႕ေပးၾကေသာ ပရိတ္သတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေသာေန႔ေလးျဖစ္ပါေစ ေက်းဇူးလည္းအထူးတင္ရွိပါတယ္ေနာ္။
Previous Article ဆီးချိုသမားတွေအတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့ ခဝဲသီး၏ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများ
Next Article ပိုက်ဆံငါးသောင်းလှုလို့ ဝမ်းသာပြီးထိုင်ကန်တော့ရှာတဲ့ ဆိုက်ကားဆရာအဘိုး (ရုပ်သံ)